बाडुलीबाट छुटकारा पाउने सरल तरिकाहरू
Q आज मेरो तल्लो ढाँड र पेटमा दुखेको छ । सुई हानेपछि अहिले यो राम्रो छ । यो बितेको ६ महिनामा दोस्रो पटक हो तर गएको एक वर्षदेखि थोरै दुखाई भईरहेको महसुस गर्दछु । २०१२ मेमा डाक्टरले यू.एस.जी. डब्ल्यू/ एको सुझाव दिनु भएको थियो तर रिपोर्ट सामान्य थियो । कहिलेकाहीं दुख्छ र मेरो लिङ्ग चिलाउँछ । कृपया यो किन हुन्छ भनेर मलाई सहयोग गर्नुहोस्, डाक्टरसाप ?
तल्लो ढाँड दुख्ने समस्या भनेको विकिरणयुक्त दुखाई हो जुन पेटको समस्याको कारणले हुन्छ । त्यहाँका प्वाल भएको ईन्टरस्टिसियल साईटिटिस, क्रोनिक प्रोस्टाटिसटिस जस्ता समस्याहरू छन् जसले लिंगको मूत्रस्थरणमा दुख्ने रोग हुन सक्छ । पहिला संरचनात्मक समस्या साईस्टोस्कोपीद्वारा हेर्न आवश्यक छ । यो मूत्रीय स्ट्राइचर वा मूत्रथैली समस्याको लागि परिक्षण गर्न चाहिन्छ । पिसाबको विश्लेषण, पिसाबको कल्चर र यूरेथ्रल स्वाबले किटाणु वा यौन संचारित संक्रमण रोक्न सक्दछ । यसको निदानको लागि युरोलोजिष्टसँग परामर्श लिनुहोस् ।
Q संक्रमण हुने अवधिहरू के- के हुन् ?
संक्रमण अवधि संक्रामक रोगको जोखिम र पहिलाको संकेत वा उस्तै लक्षणको प्रस्तुतिको बिचको समय हो । विभिन्न संक्रमणहरूको फरक संक्रमण अवधि हुन्छ ।